Ikuwadoor hundeessaa dhaabbata "WikiLeaks" jedhamuutiif lammummaa kennuu beeksifte - NuuralHudaa
Ikuwadoor hundeessaa dhaabbata “WikiLeaks” jedhamuutiif lammummaa kennuu beeksifte
Ikuwaadoor Juuliyaan Assanjee hundeessaa weebsaayitii "WikiLeaks" jedhamutiif December 12/2017 lammummaa kennuu beeksifte.
Ikuwaadoor Juuliyaan Assanjee hundeessaa weebsaayitii “WikiLeaks” jedhamutiif December 12/2017 lammummaa kennuu beeksifte. Juuliyaan Assanjee bara 2012 irraa eegalee magaalaa London Imbaasii Ikuwadoor keessatti kan dhokatee jiraatu yoo tahu, Ameerikaa fi biyyoonni Awurooppaa hedduun kan barbaadamu tahuunis ni beekkama.
Juuliyaan Assaanjee dhaabbata isaa WikiLeaks jedhamuun dokumantiiwwan icitii mootummoota addunyaa baasuudhaan saaxilaa ture. Kanuma hordofuun mootummoonni biyyota warra Lixaa himannaa gara garaatiin barbaachaa yeroo turanitti, Ingilaand magaalaa London Imbaasii Ikuwaadooritti dheessuun, waggoota shanan dabraniif achi keessaa osoo hin bayin turuun isaa ni yaadatama.